Amit Khanna's Articles na Martech Zone |
Edemede site na Amit Khanna
Amit Khanna bụ Onye isi ala nke Business Small and Medium na Ngbanye ozi ebe ọ na-ahụ maka ịnya ụgbọ ala maka nnukwu akụkụ nke ụlọ ọrụ na ịzụlite usoro ikikere ikike. Ọ duru ndị ọrụ abụọ nke ụlọ ọrụ sọftụwia nke ihe ịga nke ọma, InfoUSA na Salesgenie.
N'ime ihe karịrị 222 nde ndị ọrụ na US naanị, email nwere nnukwu ikike dị ka ikpo okwu ahịa. Email bụ ngwa ọrụ dịgasị iche iche enwere ike iji kpoo ihu igwe oyi, soro ndị ahịa dị ugbu a kwurịta okwu ma nwee atụmanya ịchụpụ azụmaahịa ọhụụ. Ndị ọkachamara n’ire ahịa Email na-aghọta ihe ndị bụ isi, dịka mkpa ọ dị ịkpa nka ekike okwu gbara ọkpụrụkpụ yana gụnyere oku siri ike ime ihe. Mana ọbụna ndị na-ere ahịa email nwere ike ịda